Yiyiphi ingxaki yokuthetha yentetho?
Ingxaki yokuthetha ikhulunywe xa intetho yomntwana iqhutywe kakubi ngakumbi kunokontanga okanye xa iqulethe iiphotho zokuthetha. Nangona kunjalo, kufuneka kuphawulwe ukuba ngexesha lokubamba inkulumo kumntwana, iziphoso ezinokuthetha ezifana ne-dyslasia, ukuxilonga, kunye nabanye azibheki njengeziphene. Ukuphazamiseka kwentetho, balelwa ukuba, njengokuba umntwana ekhula, apheli.
Iimbangela zeengxaki zokuthetha ezichazayo.
Iimbangela zokuphazamiseka kwentetho ecacileyo zihlukeneyo. Bangakwazi ukuvela ngenxa yokuphazanyiswa ekuphuhlisweni kwengqondo, izifo okanye ukungabikho kokuzalwa komzimba kwezixhobo zentetho, ukuphazamiseka kokusebenza kwezixhobo zokuthetha okanye ingqondo, ukulahlekelwa kwindlebe, kunye neengxaki ezahlukeneyo zengqondo.
Ukubiza ngokuchanekileyo amagama angabantwana kuphela abanokuva. Ngoko ke, kufuneka uhlolisise rhoqo ukuvalelwa komntwana. Ukuba umntwana ngokukhawuleza eyeka ukubetha, kuyiphuthuma ukubona ugqirha.
I-Dysplasia yigama elingafanelekanga lokuthetha izandi ngenxa yokungaqhelekanga kwezixhobo zokuthetha (ulwimi, isibhakabhaka, njl.), Ukuphulwa komsebenzi wesimiso se-nervous or deafness. Umntwana ulahlekelwa izandi zomntu ngamnye okanye udibaniso lwakhe, utshintshe kwiindawo okanye ngegama elingalunganga. Isigulana somntwana sifana nobudala, isivakalisi silungile. Ukuchithwa okungafaniyo kubantwana ukuya kwiminyaka engama-4-5 kuthathwa njengesiqhelo kwaye kuthiwa ngumdala, okanye i-dyslalia yomzimba. Izizathu ze-dyslasia zinokuhluka, umzekelo, ukulahlekelwa kwindlebe, ukulimala kwengqondo, ukuphuculwa kwengqondo ngokukhawuleza, ukuzala, okanye "umbi" umzekelo wabazali (xa abazali bengaphambanga amagama).
I-Dysplasia inokuphuhliswa ngenxa yokulimala komlomo, ukuphazamiseka kwemihlathi kunye namazinyo.
I-Lisp - ukungabi nakwizwi lokumemeza nokubethelela izandi, kubangelwa ukungabikho komhlathi kunye namazinyo, ukungavumi, njl. Kunzima kubangelwa ukubizwa kwamagama c, w, w, w. Iimbangela zokulumkisa, ukukhubazeka kwemoto yomlomo, ulwimi oluthile lweelwimi, ukulahlekelwa kwindlebe, ukuphazamiseka kwengqondo. Ama-anomali amazinyo kunye neminqa kufuneka alungiswe. Kungekudala unyango luqalisiwe, bhetele umphumo.
Ukudibanisa kwe-Nasal (rhinolalia).
Nge-rhinolalia, izandi ezithethiweyo ngokubhaliweyo kunye nezandi zifuphi eziqhelekileyo, kodwa zibe ne-hue ye-nasal, ekubeni i-air jet ingena empumleni. Abantu abadala bahlala bethetha "empumlweni" ngumkhwa okanye inkolelo yokuba intetho enje "ngumqondiso wobulumko." Iimbangela eziqhelekileyo zeendlela ezinzima ze-rhinolaly ziyi-anomalies yokuzalwa komzimba, ukukhubazeka kolwimi olumlomo, usebenze entanyeni nasemqaleni (umz., Ukutyunjwa kwe-tonsillectomy ukususa i-palatine tonsils). Ukuxinana kwe-nasal kuphawulwa ngokunyuka kweetoni zeelatine. Ukungabikho komntwabakho kwintlungu, njengomthetho, kupheliswe ngongenelelo olusakhulayo. Ngokuyimpumelelo yonyango oluchazwe ngumgqirha wenkulumo.
Ukubetha kuyinkathazo yentetho ngendlela yokulibaziseka kwizandi, iilllabha kunye nokuphindaphinda kwazo ngenxa yokuxubana kwezihlunu zesebenzisa izixhobo zokuphefumula. Ukuqhaqhaqhaqeka kwenzeka ngokuqhelekileyo ebuntwaneni emva koyika, ukusulelwa, ukuxhala, njl njl. Izinto ezinobungozi - ukuphuculwa kancinci kwentetho kumntwana, ukuphazanyiswa kobukhosi beengqondo, ukungakhuselekanga, abazali abahluphekayo. Uphulo luvame ukuphucula intetho yokuxhamla abantu. Ngomnyaka wesithathu nowesine wobomi, abantwana abaninzi banesigxina (xa kunzima kubo ukubiza igama elitsha). Nangona kunjalo, ukunyakaza okunjalo ku-70-80% yabantwana kungekudala kuya kudlula.
Ngalesi sifo, intetho kubantwana ihamba ngokukhawuleza, ingaqapheli. Xa bethetha, "bayagwinya" iilwimi zamagama okanye amagama. Ngokuqhelekileyo le ndlela yokuthetha ingenangqondo. Iminyaka engama-3-5 yobomi inkulumo enjalo yomntwana ayithathwa njengophambuke. Kunzima ukugulisa izigulane, kuba abaninzi babo bangaphelelwa yimonde, ezingavumelekanga ukuba bathethe, bavakalise amagama athetha.
Ukuba umntwana ufuna ukukuxelela into ethile, phulaphula ngokukhawuleza. Ukuba uyangabaza, musa ukumnceda, ungagqiba isigwebo endaweni yoko, nokuba uyazi kakuhle into afuna ukuyithetha. Musa ukuhlekisa ngomntwana ngenxa yeeposiso ezincinane zokuthetha okanye intetho ekhethekileyo. Kulungile ukuphinda ngokuchanekileyo (ingagxininiswa kakhulu) igama alichaze ngokungalunganga. Nangona into yokuba intetho yezingane ihlekisayo, ungayithathi kubo!
Ingqondo yezingane kunye nemifanekiso
Ukubethela iintsana: iindlela zokugqoka
Umklami wezingane: iipuzzle, imizobo
Kunokuba uthathe inkunzi eneminyaka elilodwa
Kuthekani ukuba umntwana akafuni ukudweba?
U-Angelina Jolie uya kuzama kwiSihlalo saseRashiya
Bun buns kunye nesinamoni
Amanyathelo amahlanu kwiholide engalibalekiyo
Yinandi kwaye iyanceda ngeeholide
Umntu okhulelweyo uNataliya Vodyanova wabonakala esidlangalaleni ngesambatho esincinane
Imithetho yokukhulisa abantwana kubazali
Icandelo 1. Ukuzonwabisa ngexesha lokukhulelwa: Yintoni enokuyenza kwaye ayikwazi ukuyenza?
Isibheno "Ukukhanya kwezithuthi"
Kubanda kubantwana: indlela yokuyiphatha ngayo